I-Lake Summit Nest, i-Dock & Boathouse - I-Airbnb
I-Lake Summit Nest, i-Dock & Boathouse
Saluda, North Carolina, i-United States
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Melinda
U-Melinda Ungumbungazi ovelele
Indawo yokuphumula ethulile esendulini ngenhla kwe-Lake Summit ezungezwe yimvelo nazo zonke izinto eziwusizo zesimanje. Jabulela ukusetshenziswa kwendlu yethu eyisikebhe/idokodo echibini elikhulu elihle. Vakashela izindawo zomlando eziseduze, amapaki kazwelonke, izindawo zokudlela, & izimakethe. Kulula ukuya e-Hendersonville nase-Saluda. Sebenzisa ama-kayak ethu nebhodi lokugwedla ukuze uhlole ichibi, ubhukude kanye nepikiniki edokisini, uhambe echibini lomgwaqo, udlale i-badminton enkantolo yethu, uzulazule engadini noma nje idwala emphemeni wakho.
Ekuqaleni indawo yokuhlala yezisebenzi emagcekeni endlu eyakhiwe umsunguli wechibi ekuqaleni kwawo-1920, lesi sakhiwo sesilungiswe saba yindawo enkulu evulekile yomqondo eyimfihlo kakhulu futhi enomnyango waso. Abanikazi bahlala endlini enkulu enamakati ama-3.
4.98 · 58 okushiwo abanye
Eduze neSaluda (10 min.), Hendersonville (15 min), Tryon (20 min), Asheville (30 min), Greenville, SC (30 min) noma Brevard (40 min)...kuhlale kukhona okumele kuhlolwe. Izindawo zokudlela eziningi eziseduze, izimakethe ze-tailgate, izitolo zasendulo, izindlela zokuhamba izintaba, imigqa ye-zip, ubuciko bendawo nemisebenzi yezandla, izindawo zokuphuza utshwala, izitolo zewayini, i-Biltmore Estate, i-Carl Sandburg Estate, i-Tryon International Equestrian Center, i-Blue Ridge Parkway, i-Dupont & Pisgah Forests
Singumbhangqwana osewathatha umhlalaphansi ojwayelene kakhulu nendawo futhi sizimisele ukusiza ngeziphakamiso noma izikhombisi-ndlela. Siphinde sihloniphe ubumfihlo bezivakashi zethu.
UMelinda Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Saluda namaphethelo